खाना खेर जान नदिन साउदी अरबमा यस्तो थाल ! – Voice Samachar
मुख्य पृष्ठ /News/खाना खेर जान नदिन साउदी अरबमा यस्तो थाल !
खाना खेर जान नदिन साउदी अरबमा यस्तो थाल !
काठमाण्डौ – साउदी अरबमा बर्सेनि प्रत्येक घरबाट झण्डै २ सय ५० किलो खाना खेर जान्छ । यही खाना खेर जाने क्रमलाई रोक्न एउटा विशेष प्रकारको थालको डिजाइन गरिएको छ ।
नयाँ डिजाइन गरिएको थालमा धेरै खाना देखिन्छ । थालीको बीचमा धेरै गहिराइ नभएको हुँदा थोरै खाना पस्किए पनि धेरै देखिन्छ । यसरी खाना फाल्नबाट जोगाउन सकिन्छ ।
यसलाई तयार गर्ने उद्यमी मशाल अल्काहरशीले नयाँ थालको मद्दतले ३० प्रतिशतसम्म खाना खेर जान रोकिएको दावी गरेका छन् ।
साउदी अरबमा खाना पस्किने तरिका थोरै भिन्नै छ । थालमा धेरै खान पस्किने गरिएको छ । उद्यमी अल्काहरशीले तयार गरेको थाल साउदी अरबको धेरै रेस्टुरेण्टमा प्रयोग गरिसकिएको छ । यो थालको मद्दतले वर्षमा झण्डै ३ हजार टन चामल खेर जानबाट जोगाउन सक्ने दावी गरिएको छ ।
खाना खेर जाने कारण : कम मूल्यमा नै खाना पाइन्छ
गएको वर्ष रियादको किंग सउद विश्वविद्यालयले गरेको अनुसन्धानअनुसार यहाँ सरकारी आर्थिक सहायताका कारण खाना कम मूल्यमा नै सरल तरिकाबाट पाइन्छ, जसलाई स्थानीयले गम्भीरतापूर्वक लिँदैनन् र खाना खेर जाने गर्दछ ।
साउदी अरबमा खानालाई पोषक तत्व नभइ सांस्कृतिक पहिचानको रुपमा लिइन्छ । मानिसहरु धेरै खाने बानी र बढ्दो शारीरिक तौललाई मध्यनजर गर्छन् ।
४० प्रतिशत मोटोपनाबाट ग्रसित
स्थानीय सञ्चारमाध्यमका अनुसार साउदी अरबमा ४० प्रतिशत जनसंख्या मोटोपनाको समस्याबाट ग्रसित छन् । साउदी अरबमा तेलको मूल्यमा वृद्धि हुँदा मानिसमा तीन वटा शोख थियो– सपिङ, खानामा रमाउने र प्रार्थना गर्ने । यद्यपि यसमा समयसँगै परिवर्तन आएको छ ।
खाना खेर जानबाट जोगाउन सरकारसँग माग
साउदी अरबको फूड बैंक र अन्य संस्था मिलेर होटल, विवाहको आयोजन स्थलमा बढी भएको खाना जम्मा गरेर आवश्यक ठाउँमा पुर्याउने गर्दछन् । यी संस्थाले खाना खेर फाल्नेलाई दण्डित गर्न पनि सरकारसँग माग गरिरहेका छन् ।
जल एवं कृषि मन्त्रालयका अनुसार साउदी अरबमा प्रत्येक वर्ष हरेक घरबाट २ सय ५० किलो खाना खेर जान्छ ।
छिट्टै धनी बन्न खोज्ने युवती यसरी फसिन्